Istaraatiijiyad siyaasadeed ka dhan ah argagixisada oo ay dowladda sameysay – Radio Muqdisho
Istaraatiijiyad siyaasadeed ka dhan ah argagixisada oo ay dowladda sameysay
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay soo bandhigtay istaraatiijiyad cusub oo ka dhan ah argagixisada Soomaaliya, taasoo sahleysa soo afmeeridda kooxaha nabadda diiddan ee Soomaaliya.
Kulan xasaasi ahaa oo golaha wasiirrada Soomaaliya ku yeesheen magaalada Muqdisho, ayeey wasaaradda Amniga Gudaha Soomaaliya ku horgeysay istaraatiijiyad siyaasadeed ka dhan ah argagixisada, taasoo ku wajan sidii xal looga gaari lahaa arrimaha la dagaallanka xagjinimada.
Israatiijiyad siyaasadeedkan ayaa leh tiirar faah-faahsan oo ay ku xusan yihiin sida loogu amba-qaadayo qorshahan ay dowladda ugu talagashay in ay dalka oo dhan ku nabaddeyso, waxa ayna Tiirarka ka kooban yihiin shantan.
1-Dowladda Federaalka Soomaaliya, iyadoo qorshe cad ka yeelatay la dagaallanka argagixisada ayeey xoojineysa xag Military iyo xag Sirdoon
2-Dowladda Soomaaliya waxa ay xoogga saareysaa xasilinta dhammaan deegaannada laga xoreeyey maleeshiyaadka argagixisada, iyadoo ahmiyad gaar ahna siineysa sarreyna sharciga iyo dowladda wanaagga.
3-Dowladdu waxa ay sameysay qorshe looga soo kabanayo weerarrada gurracan ee argagixisada u geysato Ummadda Soomaaliyeed.
4-Dowladda Soomaaliya waxa ay sameysay istaraatiijiyad ku aaddan in hal cod ay shacabka Soomaaliyeed ugu gudbiso waxyaabaha ku saabsan wararka Xagjiriinta Soomaaliya ee Al-Shabaab ama UGUS.
5-Tiirka shannaad, waxa uu leeyahay, dowladda Soomaaliya waxa ay dhaqan baddellid ku sameyneysaa dhallinyarada ay marin-habaabiyeen argagixisada, isla markaana waxa ay fursad siineysaa horjoogayaasha iska diida ka sii mid ahaanshaha argagixisada oo fikir qaldan ku hoggaaminayey dhallinyarada ay qadleen, waxaana Culimada Soomaaliyeed ay xoojinayaan wacyigelinta la xiriirta sidii shacabka loogu gudbin lahaa dhibaatooyinka ay leeyihiin xagjiriinta Soomaaliya ama argagixisada.
Shantan tiir ee ay sharci siyaasadeedka ku soo saartay Xukuumadda Federaalka Soomaaliya,umma baahna in loo gudbiyo Barlamaanka Soomaaliya oo waxa uu ku dhaqangalayaa sidiisa, si loo dardargaliyo qorshaha xasilinta, nabaddeynta iyo cadaaladda ee dowladda Soomaaliya.
Arrintan ayaana bulshada Soomaaliyeed siineysa fursad ay kula shaqeeyaana hey’adaha ammaanka, si looga hortago isku dey walba oo ay damacsan yihiin nabad diidka.
Ciidamda Ammaanka Kenya oo Soo Gabagabeeyay howlgalkii Jaamacada Garissa “SAWIRRO”